John Bruno, Saxiixa cusub ee Google ee injineerka Apple | Waxaan ka socdaa mac
John Bruno, saxiixa cusub ee Google ee injineer ka tirsan shirkadda Apple
Waxaa jira dhinacyo Apple ka mid ah oo shirkadaha kale ee qaybta ay jeclaan lahaayeen: iyagu waa soosaarayaasha Chips-kooda - processor-ka - inay ku daraan qalabkooda. Sidoo kale waa run in Huawei (Kirin-kooda) ama Samsung (Exynos) labaduba ay yihiin tusaalayaal kale oo wanaagsan oo tan ah. Iyo Google, oo isku dayeysa inay ka dhex muuqato iibinta qalabkeeda, waxay dooneysaa inay sameyso jibbaarro u gaar ah sii deynta mustaqbalka.
Baadhitaankiisa uu ku doonayo inuu helo qof hoggaamin kara qaybtan ayaa sabab u noqotay in shirkadda Mountain View ay dib ugu dhacdo madaxa injineerka shirkadda Apple ee caanka ah, John Bruno. Injineerka laftiisa ayaa durba ka tarjumaya muuqaalkiisa 'Linkedin' ee uu ku saxiixay shirkadda weyn ee internetka.
Google wuxuu ku sii xoogaysanayaa qaybta tikniyoolajiyadda. Iyo awood sameyso qalab aad adigu iska leedahay isla markaana ha u shaqeeyo si aan kala go 'lahayn software waa waxa aad jeceshahay inta badan, maahan kaliya Google, laakiin shirkad kasta oo korantada macaamiisha ah. Sidaa awgeed, kartida marwalba waa la raadiyaa si loo helo kan ugu fiican.
John Bruno waa AMD-dii hore ee shantii sano ee ugu dambeysay ku qaatay Apple soo saarista Chips-ka Apple. fiiri sida, tusaale ahaan, processor-ka ku qalabeeyay iPad Pro inuu shaqeeyo. Waxqabadka A10X xitaa wuxuu ka fiicnaanayaa qaabeynta qaar ka mid ah barnaamijyadii ugu dambeeyay ee 'MacBook Pros'.
Sidoo kale, saxiixa Bruno wuxuu ku biirayaa kuwa kale shirkadaha kala duwan ee qaybta sida ay awoodaan Qualcomm ama Motorolaiyo sidoo kale injineerada kale ee Apple. Waxa aan ku cadeynay waa in dhaqdhaqaaqan, Google uu doonayo inuu ka dhex muuqdo tartanka oo uu naqshadeeyo qalab si gaar ah loo sameeyay oo ka baxsan tartanka ku saabsan Android, halkaas oo ay run tahay in barnaamijka Google uu leeyahay waxyaabo yar oo cusub marka laga reebo Samsung ama Huawei. Sidoo kale, John Bruno wuxuu durba khibrad u leeyahay ka hormarinta tartanka oo ka dhig wax soo saarka Apple inay sameeyaan iskudhaf weyn oo u dhexeeya hardware y software.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » John Bruno, saxiixa cusub ee Google ee injineer ka tirsan shirkadda Apple
Apple Watch wuxuu gaari lahaa 27 milyan oo unug oo la iibiyay sanadka 2018